Maimaimpoana ny fahalalàna, ny loharanom-pahalalana tsy ... | Martech Zone
Alatsinainy, Septambra 25, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Ao an-trano aho anio. Tsy salama aho - Mieritreritra aho fa be dia be ny asa sy ny adin-tsaina mahazo ahy. Nihorona teo ambony sezalava aho dia maty ny herinaratra. Mety hiharatsy izany raha avy ny orana sy ny hatsiaka.
Nanam-potoana kely hamakiana sy hatoriana aho androany maraina mba hanandramako manilika izay bibikely misy ahy. TechZ dia nanamarika ny boky rehetra novakiako… mazàna dia tsy latsaky ny 3. Mamaky 3 aho izao ary miandry 2 hafa aorian'izay. Tiako ny mamaky. Manadio ny lohako izy ary mampiala voly ahy kokoa noho ny mijery sarimihetsika na fahitalavitra. Lazaiko amin'ny zanako fa ny zavatra mahafinaritra amin'ny famakiana dia ny fandokoanao ny sary na ny sarimihetsika ao an-dohanao. Rehefa mandeha mijery sarimihetsika voasoratra momba ny boky aho dia diso fanantenana matetika.
Miparitaka aho… ary manana 30 na minitra sisa amin'ny solosaina findainy aho. Ary mety ho hitan'ny mpifanila vodirindrina amiko fa misy manao an-keriny ny router (mazava ho azy aho). Rehefa namaky aho dia nanomboka nieritreritra, ary naniry ny hanoratra momba izany.
Ity ny teôriaziko… ny fampahalalana dia tsy mendrika toa ny taloha intsony. Miaraka amin'ny Internet, ny fahalalana dia mihamora sy mihena hatrany amin'ny faharoa. Ny andro nanakarama ireo mpanolo-tsaina hilaza amintsika izay izahay tokony ny fanaovana dia lavitra antsika. Fa kosa, manakarama mpanolo-tsaina izahay noho ny ataon'izy ireo afaka ataovy ho anay.
Mitombo ny sandan'ny loharanom-pahalalana ary mihena ny fahalalana.
Manana fahalalana ampy aho hananganana orinasa lehibe. Ny tsy ampy amiko dia ny enti-manana - ny fotoana sy ny vola. Rehefa manadihady ireo mpanolo-tsaina fomba fijery aho dia matetika tsy noho ny zavatra azony atao na tsy azony lazaina amiko. Raha ny marina dia mazàna aho mahatakatra bebe kokoa noho izy ireo momba izay angatahiko amin'izy ireo. Raha mahazo aina amin'izy ireo aho dia manakarama azy ireo hanao ilay asa an-tanana… satria afaka mifantoka amin'ilay olana fotsiny izy ireo. Tsy afaka manao an'izany aho.
Taona maro lasa izay, dia namboatra ny fiarako manokana aho. Nataoko izay rehetra tokony hatao amin'ny fiara. Nanam-potoana aho, ka handeha hividy boky ary handondona azy. Rehefa mihalehibe aho dia tsy tiako intsony ny manala ny knuckles-ko, ka mitondra azy any amin'ny fivarotana fotsiny aho. Sarobidy kokoa amin'ny fotoako ny manana olon-kafa manamboatra azy fa tsy izaho manamboatra azy. Na dia amin'ny vidin'ny fikojakojana fiara be loatra aza.
Tsy izany ve no làlana izay ihetsehan'ny zava-drehetra? Andao horaisina ho ohatra ny Search Engine Optimization (SEO). Matoky tanteraka aho fa, raha omena fotoana, afaka manamboatra tontolo boaty fasika aho, manamboatra ary manandrana mijery ny fomba ahafahako miakatra eo an-tampon'ny algorithman'ny Search Engine. Saingy tsy manam-potoana aho amin'izany. Azo antoka - tsy ny rehetra no afaka mamaky bilaogy ary manomboka manao izany. Azoko… fa maro ny olona mahay.
SEO fahalalana is maimaim-poana - misy andiana tranokala SEO sy bilaogy amin'ny Internet izay mandefa hatrany ny fitsapana sy ny zavatra hitany. (Nampiasako ny sasany tamin'ireo fanitsiana tao amin'ny tranokalako). Tsy manandrana mametraka ny consultant SEO aho… mendrika ny vola. Saingy tsy mendrika ny vola izy ireo noho ny fahaizany, izy ireo dia mendrika ny vola ho loharano sarobidy. Ataon'izy ireo isan'andro izany mba tsy hilainao!
Ny Internet is ny Superhighway momba ny fampahalalana. Fantatro fa antitra sy cliche izany, saingy marina izany. Ny fanomezana fizarana fahalalana dia mihamora vidy. Raha te-hitady ny fomba hitsaboana ny hoditra maina an'i Jack Russell aho na te-hamorona rafitra Ajax… tsy maninona aho raha hijery azy io.
Rehefa lasa milamina kokoa ny Net ary mora mitady vaovao, heveriko fa zava-dehibe ny fiheverantsika ny tenantsika ho ambany noho ny "manam-pahaizana" ary bebe kokoa amin'ny "loharano". Ny fahalalana dia manerana ny toerana rehetra ary maimaim-poana amin'ny fakana azy. Tsy izany ny loharano.
Manaiky ve ianao?
Sep 26, 2006 amin'ny 10: 26 AM
Heveriko fa mifanaraka tsara amin'ny fanambaràna ataonao ity voromailala ity… http://www.telco2.net/blog/2006/09/profiting_from_adjacent_busine.html